ARMY တို့ကော မထင်မှတ်ထားတဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ အငိုအသန်ဆုံးသူ… | News Bar Myanmar
ARMY တို့ကော မထင်မှတ်ထားတဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ အငိုအသန်ဆုံးသူ…
BTS အဖွဲ့မှာ ဘယ်သူက အငိုအသန်ဆုံး ဖြစ်မလဲ? ARMY တို့ကော စဉ်းစားဖူးကြလား? BTS အဖွဲ့ရဲ့ အငိုအသန်ဆုံးကတော့ အသည်းကျော်လေး Jung Kook ပါတဲ့။ ဒါကို BTS အဖွဲ့ရဲ့ interview တစ်ခုမှာ ဖြေသွားခဲ့တာပါ။
တစ်ခါက BTS အဖွဲ့ကို ” စိတ်ခံစားမှု အများဆုံး/ မျက်ရည်အလွယ်ဆုံးသူ ဟာ ဘယ်သူလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း မေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ အငယ်ဆုံးလေး Jungkook ကို အများဆုံး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အစ်ကိုတွေကတော့ Jungkook ကို ” အခုကော ငိုတော့မှာလား” လို့တောင် စနောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ဘယ်အခါမှာ မျက်ရည်ကျတတ်တာလဲ ဆိုတဲ့ အမေးကိုတော့ Jungkook ဟာ ” Concert တွေ ပြီးတဲ့အချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုအကြောင်း စဉ်းစားမိတဲ့အချိန်ဆို ငိုတတ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါ့အပြင် ချစ်ရတဲ့ ARMY လေးတွေနဲ့ အဖွဲ့ဝင် အစ်ကိုတွေအကြောင်း စဉ်းစားမိတဲ့ အချိန်ဆိုရင်လည်း မျက်ရည်ကျတတ်ပါသေးတယ် လို့လည်း ဖြေသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီအခါမှာတော့ Suga ရဲ့ Jungkook ကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးဟာ နွေးထွေးလွန်ရလှပါတယ်။ ” မင်းငိုချင်ရင်ငိုပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းသာ မငိုပါနဲ့” တဲ့။ တကယ့်ကို အငယ်ဆုံးလေးအပေါ် ချစ်တဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ပေါ်လွင်လွန်းလှပါတယ်။
ဒါ့အပြင် BTS အဖွဲ့ဝင်တို့ရဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအပေါ် ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်ထားလေးကိုလည်း သိသာ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီမျက်ရည်လွယ်တတ်တဲ့ Jungkook လေးကတော့ BTS နဲ့ ARMY တို့ရဲ့ အဖိုးတန် “Golden Maknae” လေးပါပဲ။
Next အလွတ်တန်းသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ်ရပ်တည်နေကြတဲ့ နာမည်ကြီးထိုင်းအနုပညာရှင်မင်းသမီး (၁၁) ဦး »
Previous « "Mr.Queen" ဇာတ်လမ်းတွဲ​ကြောင့် တစ်ဖန်ပြန်ပြီး ​ဝေဖန်ပြစ်တင်ခံ​နေရတဲ့ မင်းသမီး Shin Hye Sun